Otu Onye isi na nso nso a kesara m Ahịa na Ahịa Metrics maka sọftụwia na-aga nke ọma site na ụlọ ọrụ ndị ọrụ site na Insight Venture Partners - na ọnụọgụ nwere ike ịju gị anya. Ọ na-ewe ọrụ dị ukwuu iji nweta onye ahịa ọhụrụ. You nweghị ike inwe otu ndị na-anaghị abata ọrụ kwa ụbọchị ma na-atụ anya ime mgbanwe.
Ọ na - eju anyị anya mgbe niile ka anyị na - agwa ndị mmekọ ihe ngwọta na ọtụtụ n’ime ha enweghị mmemme ga - akwụghachi ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa aha ha. Ndị ọrụ gị bụ (ma ọ bụ kwesịrị ịbụ) ndị mmeri maka azụmaahịa gị - na - akwalite gị n'ofe netwọkụ ha. Ndị ahịa gị bụ akụ ọzọ dị ịtụnanya. Have nwere email na-aga kwa oge na-ajụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịkọwa mmadụ? You na-enye ụfọdụ onyinye ma ọ bụ ego maka ndị na-ezigara gị? Ihe data a nwere ike ime ka ibido!
Tags: b2bb2b benchmarkb2b ntugharib2b ahịaGilad Raichstainmmegbu